Sida loo Print fariimaha qoraalka ka iPhone 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS
Sida loo daabaco qoraallo ka iPhone 5? Waxaan u baahanahay in la daabaco dhowr farriimaha qoraalka iPhone muhiim ah in aad la wadaagto wadashaqaynta aan. Walba oo soo jeedinaya? - Amy
Wax kasta oo sabab u yahay, markii aad rabto in aad daabacdo fariimaha qoraalka ah ka iPhone, waxaa had iyo jeer waa hab. Habka ugu sahlan waa in ay qaataan shaashadda ku qoran qoraalka iPhone oo u soo dir a macruufka-socon printer wireless. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto in aad daabacdo waslad ka mid ah fariimaha qoraalka ah ka iPhone, sidan marnaba ka dhigi doonaa satisified, sababtoo ah shaashada kaliya muujinaysaa jeex ka mid ah diinta. Si aad u daabacdo fariin qoraal diinta dhamaystiran ka iPhone, si fiican iyaga aad dhoofin lahaa ka iPhone in computer ah, ka dibna iyaga daabacan.
Si aad SMS ka iPhone, waxaad caawimaad ka heli kartaa laba qalab. Mid ka mid ah waa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) , iyo kuwa kale ee waa Wondershare TunesGo Retro . Labada iyaga ka mid ah waxay fursad kuu siinayaan in ay keenaan fariimaha qoraalka ah, MMS oo iMessages la lifaaq (n) HTML, XML ama TXT file ah, si aad u soo baxay si fudud daabacan kartaa.
Xalka 1: farriimaha qoraalka Print ka iPhone la Dr.Fone ee macruufka (Mac & Windows)
Xalka 2: Print iPhone SMS la Wondershare TunesGo Retro (Mac & Windows)
The World ayaa First macruufka Data Recovery Software u Users Personal
inay u dhoofiyaan jira iyo tirtiray Data aad iPhone, iPad iyo iPod taabashada
Save dhamaan fariimaha ku iPhone in computer qaab HTML, oo ​​ay ku jiraan SMS, MMS oo iMessages.
Si toos ah dhoofinta fariimaha ka iPhone, gurmad Lugood iyo gurmad iCloud.
Ma fariimaha oo kaliya, sidoo kale taageertaa xiriirada, qoraalo, taariikhda WhatsApp, xusuusinta, iyo ka badan, ilaa 18 nooc oo file.
Works u iPhone 6 Plus / 6 / 5S / 5C / 5 / 4s / 4 / 3GS, oo dhan iPad iyo iPod xiriiri 5/4.
Tallaabada 1 Ku rakib Wondershare Dr.Fone kombiyuutarka
Download, rakibi oo ay maamulaan Wondershare Dr.Fone on your computer. Markaas xiriiriyaan iPhone la your computer dhex cable USB ah, leting software si loo ogaado in aad iPhone si toos ah.
Si fudud Bedelka iPhone, iPad & iPod in Lugood & Computer
Save fariimaha qoraalka ah, MMS & iMessages la lifaaqyada sida file HTML / XML / TXT ah si aad si fudud u soo baxay daabacan kartaa ka dib.
Maamul xiriir: Import, dhoofinta, ka saar tus & hagaagsan oo Outlook.
Heeso Transfer, videos, playlists, Lugood U, Podcasts si & ka Your PC / Lugood.
Photos & albums Copy si / ka Your PC & iDevice
100% la jaan qaada macruufka 8, iPhone dambeeyay 6 Plus iyo iPhone 6.
Sida loo isticmaalo TunesGo Retro in Print Messages iPhone
Tallaabada 1. Connect iPhone
Connect aad iPhone in computer ka dib markii socda barnaamijka. Markaasaa waxaa u soo bandhigaan doonaa iPhone marka laga arko.
Tallaabada 2. Dooro SMS
Waxaad dooran eegista waxyaabaha wax fariin aad rabto in aad soo daabaco. Just u sax lagu jiro previewing.
Tallaabada 3. Dhoofinta SMS
Waxaad dhoofin karo dhamaan fariimaha la doortay sida file HTML ah si aad u computer. Waa fiican ee daabacaadda.
Tallaabada 4. Print iPhone SMS
aad ku xidhan karto kombiyuutarka lagu daabaco oo ay bilaabaan farriimaha qoraalka ee daabacaadda iPhone. Waa shaqo oo hal-click hadda.
Baro wax badan oo ku saabsan Tunesgo Retro >>
> Resource > iPhone > Sida loo Print fariimaha qoraalka ka iPhone